Kedu ka mmetọ gburugburu ebe obibi si emetụta anyị? Nke a bụ otú o si emetụta anyị. | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu mmetọ anyi si emetụta anyị
Sergio Gallego | | Mgbanwe ihu igwe, Climatology
Mmetọ gburugburu ebe obibi Ọ bụ iwu nke ụbọchị na ọbụlagodi ma ị maghị ya ma lebara ya anya, ọ na-emetụta ahụ niile. Olee mmetụta mmetọ na-emetụta anyị?
Ibi n'ime obodo buru ibu na-emetuta mmetọ gburugburu ebe obibi na nke ahụ nwere ike ịnwe mmetụta dị nro dịka naanị iwe iwe na ọrịa ndị ka njọ. Mgbe ahụ m na-akọwa ihe na-akpata ya nke mmetọ gburugburu ebe obibi a na kedu ka mmetọ a si emetụta anyị.
1 Ihe na-akpata mmetọ gburugburu ebe obibi
2 Olee mmetụta mmetọ na-emetụta anyị?
Ihe na-akpata mmetọ gburugburu ebe obibi
Mmetọ gburugburu ebe obibi a nwere anwuru nke nsi ndị dị n’ikuku dị ka carbon monoxide, sọlfọ dioxide ma ọ bụ nitrogen oxide. Ihe ndị a niile emetụta ahụ n'ụdị iyatesịt na akpịrị, ụkwara, ike iku ume ma ọ bụ ọbụna ịmalite ọrịa obi na-adịghị ala ala. Iji zere nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ịghara ịpụ n'èzí maka ime ihe n'èzí mgbe ọkwa mmetọ dị dị oke elu. Nkwado ọzọ abụghị ka ị biri n'akụkụ ala ọ bụla nwere ọtụtụ okporo ụzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Ikuku dị n’obodo ukwu ndị dị n’ụwa adịchaghị ọcha ma bụrụ nke ji ya mara mmetọ dị ukwuu. Mmetọ a bụ n'ihi ọtụtụ ihe dịka, dịka ọmụmaatụ, ikuku ndị na-esite n'ụgbọ ala ma ọ bụ na nnukwu ụlọ ọrụ na-etolite nnukwu ikuku mmetọ gburugburu ikuku. Nke a oyi akwa nke unyi ọ na-egbochi ụfọdụ oge na anyanwụ nwere ike ịmị nju ya niile ma na-emetụta oke gaa ahụike nke ndị mmadụ.
Olee mmetụta mmetọ na-emetụta anyị?
Mmetụta gburugburu ebe obibi bụ nke enyere ndị niile ụgbọ ala karịa n’obodo ndị buru ibu ma na-emetọ carbon monoxide, nitrogen oxides na carbon dioxide. Nke mbụ Ọ bụ nsi na obere usoro ọ na-emepụta isi ọwụwa, dizziness na ike ọgwụgwụ. Site na nkwekọrịta, nitrogen oxides ha na-emerụ ahụ nke ukwuu maka ndị na-arịa ụkwara ume ọkụ. N'ikpeazụ, carbon dioxide adịghị emetọ oke ma ọ na-emetụta okpomọkụ gburugburu ụwa nke uwa.
Enwere ọtụtụ ihe mmetọ anyị na-eku ume kwa ụbọchị na nke na-ebutekwa enwekwu ume iku ume, na mgbakwunye na ịkwalite allergies na anyị nwere ike ịnwe. Obi abụọ adịghị ya, mmetọ bụ ihe a ga-ebelata dị ka o kwere mee ma n'ihi nke a, anyị ga-aza ajụjụ maka oriri ma kwalite usoro ndị na-ebelata ikuku nke gas na ikuku.
Ugbu a na ị maara kedu ka mmetọ a si emetụta anyịIkekwe ị kwesịrị ịnọdụ ala ma tụgharịa uche n'otú ikuku ị na-ekuru si emetụta gị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Otu mmetọ anyi si emetụta anyị
Nke a bara uru nke ukwuu
Ndewo, kedu ka ị mere? Achọrọ m ịma, ihe a niile gbasara mmetọ ahụ
Ahụrụ m ya nke ukwuu
Zaghachi ka rodolfo castañio
Ekele dịrị m .... M na-eji ya akọ akụkọ
Zaghachi ALEJANDRA GENSOLLEN RODRIGUEZ
Site na ịrị elu nke okpomọkụ, koala na-agbanwe omume ha
Nnukwu Osimiri Reef dị na '' ọnọdụ njedebe ''